जापानका Most सबैभन्दा सुन्दर तटहरू! हेट-नो-हमा, योनाहा मेहामा, निशिहामा बीच ... - Best of Japan
जापान एक टापु देश हो, र यो धेरै टापुहरु मिलेर बनेको छ। सफा समुद्र वरपर फैलिरहेको छ। यदि तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं ओकिनावा जस्तो समुद्री तटहरूमा जानुहोस्। समुद्र किनारमा कोरल चट्टानहरू, र रंगीन माछा पौंडी पोखरीहरू छन्। स्नोर्कलिंगको साथ, तपाईं एक अद्भुत संसारको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म ओकिनावाको तटहरू परिचय गर्दछु। ओकिनावामा, समुद्रमा पौडी खेल्ने मौसम अप्रिलको आसपास शुरू हुन्छ। यद्यपि ओकिनावाको वास्तविक गर्मी मौसम मेदेखि अक्टुबरसम्म हो। स्थानीय मानिसहरू सागरमा प्रायः जुन सेप्टेम्बर सम्म पौडिन्छन्। कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईंले कुनै पनि मौसममा पौडिनको लागि भिजेको सूट लगाउनु पर्छ। व्यक्तिगत नक्शामा क्लिक गर्नुहोस्, गुगल नक्शा एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ।
यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, कृपया तल ओकिनावाको बारेमा लेख हेर्नुहोस्।
यदि तपाईं जापानको सुन्दर समुद्रीतट दृश्यको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने उत्तम सिफारिश गरिएको क्षेत्र ओकिनावा हो। ओकिनावा क्युशुको दक्षिणमा अवस्थित छन्। यसले उत्तर-दक्षिण km०० किमी र पश्चिमदेखि १,००० किलोमिटरको विशाल पानीमा विविध टापुहरू समावेश गर्दछ। त्यहाँ कोरल रीफहरू, क्रिस्टल स्पष्ट निलो ...
जापानी दृष्टिकोणबाट, टोकियो र क्योटोको अपवाद बाहेक जापानका सबैभन्दा प्रतिनिधि पर्यटन स्थलहरू होक्काइडो र ओकिनावा हुन्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई ओकिनावाको समुद्रमा परिचय दिन चाहन्छु। ओकिनावाको समुन्द्र अचम्मै सुन्दर छ। के तपाई निको हुन चाहानुहुन्न ...
ओकिनावाको महासागर मात्र स्पष्ट छैन। यसमा थकित दिमाग र यात्रुहरूको शरीरलाई निको पार्ने रहस्यमय शक्ति छ। ओकिनावा, विशेष गरी इशिगाकी टापु र मियाको टापुमा बग्ने समय धेरै रमाइलो छ। म यो पृष्ठ मा यस्तो रिसोर्ट को दुनिया परिचय गर्न चाहन्छु। ...
अहारिन बीच （टोकाशीकी टापु, ओकिनावा）
फुरुजामी बीच （जमामी टापु, ओकिनावा）
हेट-नो-हमा - कुमे टापु, ओकिनावा）
योनाहा माहामा समुद्र तट （मियाकोजिमा टापु, ओकिनावा）
सुनायामा बीच （मियाकोजीमा टापु, ओकिनावा）
कोन्डोई बीच （टेकटोमिजिमा टापु, ओकिनावा）
निशिहामा बीच （हेटरुमा टापु, ओकिनावा
Aharen बीच को नक्शा
टोकशीकी टापु अहरिन बीच क्यारामा द्वीपसमूहको सबैभन्दा ठूलो टापु ओकिनावाको मुख्य टापुको पश्चिमतिर फैलिएको छ। यो टापु एक गोल मा लगभग २ kilometers किलोमिटर पर छ। किनकि टोकाशीकी टापु ओकिनावा मुख्य टापुबाट 25० किलोमिटर मात्र टाढा छ, तपाईं एक दिनको यात्राको लागि जान सक्नुहुन्छ।
ओकाइनावा मुख्य टापुको नाहा शहरको तोमारी बन्दरगाहबाट तोकाशीकी टापुमा जानको लागि, यो speed 35 मिनेट जति छिटो जहाजको साथ "समुद्री लाइनर", १ घण्टा १० मिनेट डु fer्गा द्वारा। टोकशीकी टापुको बन्दरगाहबाट अहरिन समुद्रीतटसम्म यो बस वा ट्याक्सीबाट २० मिनेट जति हुन्छ। तपाईं कार पनि भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं टोकशीकी टापुको सरायमा बस्नुहुन्छ भने, सराय कर्मचारीहरूले तपाईंलाई कारमा लिन सक्छन्।
अहारिन समुद्री किनार एक सेता रेतीला समुद्र तट हो जसको लम्बाई करीव 800०० मीटर छ। तपाईंको अगाडि समुद्र निलो चम्किरहेको छ जसलाई केरामा निलो भनिन्छ। केटाकेटीहरू समुद्रमा पौडी खेल्ने आनन्द उठाउन सक्छन् किनकि यो उथलपुथल हो। केवल समुद्री तटमा १० मिटर हिंड्दै, तपाईं प्यारो माछालाई भेट्न सक्नुहुन्छ। कोरल रीफहरू थप फैलिरहेका छन्। तपाईं स्नोरक्लि।, कायाक्स, उडान डु boats्गा जस्ता गतिविधिहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ (तपाईं आकाशमा उड्न सक्नुहुनेछ!) र तपाईं पानीमुनि दर्शनीय डु take्गा लिन सक्नुहुनेछ। तपाईं डु by्गामा करिब 10०० मिटर टाढा बसोबास टापुमा जान सक्नुहुन्छ।
यस समुद्री तटमा, एक निगरानी कर्मचारी जुलाई देखि सेप्टेम्बरसम्म मौसमको दौरान खडा हुन्छ। समुद्री किनारहरू, रेष्टुरेन्टहरू, ईन्न्स र अन्य समुद्र तटको वरिपरि त्यहाँ छन्। अवश्य पनि शौचालय र स्नान सुविधा छन्। यदि तपाईं यो छिमेकमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं अद्भुत तारांकित आकाशमा हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
फुरुजामी बीच ओकिनावा, जापान = शटरस्टक
Furuzamami समुद्र तट को नक्शा
Zamami टापु एक करीव २ kilometers किलोमिटर टापु हो जुन केरमा द्वीपसमूहको बीचमा अवस्थित छ। यो ओकिनावा मुख्य टापुबाट करीव kilometers० किलोमिटर टाढा छ। ओकिनावा मुख्य टापुको नाहा शहरको तोमारी बन्दरगाहबाट जमामी टापुको लागि 23० मिनेट छिटो वेगको जहाजबाट, १ घण्टा minutes० मिनेट फेरीबाट। तपाईं ओकिनवा मुख्य टापुबाट यस टापुमा एक दिनको यात्राको लागि पनि जान सक्नुहुनेछ।
Zamami टापु मा धेरै सुन्दर समुद्र तटहरु छन्। फुरुजामी बीच उनीहरूमा विशेष गरी प्रसिद्ध छ। फुरुजामी बीचमा, यो टापुको पोर्टबाट बस वा ट्याक्सीबाट। मिनेट जति छ।
फुरुजामी बीच एक सुन्दर उथले सेतो समुद्र तट हो, र एक शानदार समुद्री नीलो समुद्र बाहिर फैलिएको छ। यस समुद्री किनारमा विशाल चट्टानहरू वास्तवमै नजिक छ। त्यसो भए प्यारा उष्णकटिबंधीय माछा धेरै पौंडीरहेछन्। तपाईं माछा देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ पनि गहिराई १ मिटर भन्दा कम छ।
फुरुजामी बीच डाइभिंग र स्नोर्कलिंग स्पटको रूपमा पनि लोकप्रिय छ। यो समुद्र तट हो जहाँ स्नोर्कलिंग सम्भव छ। त्यहाँ एक निर्देशित स्नोर्कलिंग यात्रा पनि छ। यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईं समुद्री कछुवाको साथ पौडी गर्न सक्नुहुन्छ। स्नोर्कलिंगको अनुभवमा तपाईले लाइफ ज्याकेट लगाउनु पर्छ।
Furuzamami बीच पसल, शौचालय र स्नान सुविधा संग पूरा भयो। त्यहाँ भाडा सेवाहरू पनि छन् जस्तै स्नोरकेल सेटहरू, लाइफ ज्याकेटहरू र समुद्री तट छाताहरू। यस समुद्री किनारको सान्डेकबाट तपाईले देख्नुहुने दृश्यहरू यति सुन्दर छन् कि तपाई कुनै पोष्टकार्ड हेर्दै हुनुहुन्छ। यो आश्चर्यजनक कुरा हो कि तपाईं त्यस्तो उत्तम समुद्री तट अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि यो ओकिनावा मुख्य टापुबाट तुलनात्मक रूपमा नजिक छ।
Zamami टापु मा, तपाईं होटल वा सराय मा रहन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो ग्रीष्म inतुमा भीड हुन्छ, त्यसैले चाँडै बुक गर्नु नै राम्रो हुन्छ।
ओकिनावा, जापान = शटरस्टकमा हेट-नो-हामा
जहाँसम्म तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, यो शुद्ध सेतो समुद्र तट हो, र पन्ना निलो रंगको समुन्द्र बाहिर फैलिएको छ। ओकिनावामा त्यस्तै सपना जस्तो समुद्र तट छ। यो "Hate-no-hama" कुमे टापुको5किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ।
कुमे टापु an। किलोमिटर वरपर रहेको टापु हो जुन ओकिनावा मुख्य टापुबाट १०० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। यो टापुको बन्दरगाहबाट Hate-no-hama सम्म डु by्गामा लगभग 53० मिनेट लिन्छ।
हेट-नो-हामा, सहि हो, तीन निर्जन टापुहरूको लागि सामान्य शब्द हो। ती सबै निर्जन टापुहरू सुन्दर सेतो समुद्र तटहरू हुन्। यी सेता समुद्री तटहरू लामो र साँघुरो हुन्छन् र करीव km किमि लामो हुन्छन्। उच्च समुद्री समुद्री किनारमा पनि सेता समुद्र किनारमा डुब्दैन।
धेरै डु boats्गा तीन समुद्र तट बीच बीचमा आइपुग्छ। धेरै अवस्थाहरूमा, आगन्तुकहरूले चित्रहरू लिन्छन् र यो समुद्र तटमा हिँड्दछन्। तिनीहरू पनि गर्मी मा पौडी। यद्यपि पौंडी क्षेत्र सुरक्षाको लागि सीमित छ। र त्यहाँ समुद्री किनारमा धेरै धेरै कोरल चट्टानहरू छैनन्। यस कारणले त्यहाँ धेरै धेरै ट्रपिकल माछाहरू छैनन्।
यदि तपाईं हेट-नो-हमामा जानुहुन्छ भने, तपाईंले पहिले डु boat्गा बुक गर्नु पर्छ। दुर्भाग्यवस, मेरो सबैभन्दा राम्रो ज्ञानको लागि, कुमे टापुको एक टुर कम्पनी छैन जो एक वेब साइटको साथ अंग्रेजीमा आरक्षण स्वीकार गर्दछ। मेरो सुझाव छ कि तपाईंले पहिले होटल वा ईन्सनको लागि आवास आरक्षण बनाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईंको होटेल वा सराय मार्फत डु book्गा बुक गर्नुहोस्।
मेरो उत्तम सिफारिश निम्न कुमेजिमा ईफ बीच होटेल हो। यो होटल कुमे टापुको सुन्दर ईफ बिचको अगाडि अवस्थित छ। यो होटलसँग एक समुद्री पसल छ "इफ स्पोर्ट्स क्लब" हेट-नो-हामा भ्रमण ह्यान्डल गर्दै। गर्मीयाममा, यो पसलले भित्री किनारको समुद्री किनारमा जानको लागि एक यात्रा पनि गर्छ, जुन सबैभन्दा सुन्दर भनिएको छ। तपाईले होटेललाई ईमेल वा फोन मार्फत सम्पर्क गर्नुपर्दछ। होटलबाट पोर्टमा शटल अनुरोध गर्नुहोस्।
>> कुमेजिमा ईफ बिच होटलको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
हेट-नो-हमामा जाँदा, कृपया सनस्क्रीन क्रीम जस्तो सनबर्न उपायहरू नबिर्सनुहोस्। बीचमा बीच मा एक सरल शौचालय छ।
गर्मी मा मियाकोजीमा। Yonaha maehama समुद्र तट को परिदृश्य = शटरस्टक
Yonaha Maehama समुद्र तट को नक्शा
Yonaha Maehama बीच (Maebama बीच) एक विशाल समुद्र तट हो जुन7किमि लामो छ, ओकिनावा प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो मियाकोजिमा टापुको दक्षिणपश्चिमी भागमा फैलिन्छ। यो समुद्री तट एउटा उथले समुद्र तट हो जुन शुद्ध सेतो राम्रो बालुवाले चित्रण गर्छ। शुद्ध सेतो बालुवा समुद्रदेखि दर्जनौं मिटरसम्म निरन्तर चलिरहेको छ, यसलाई "पूर्वको सबैभन्दा सेतो समुद्री किनार" भनिन्छ। रिसोर्ट होटल "मियाकोजिमा टोक्यू होटेल एण्ड रिसोर्ट्स" को बसाई, साथै रेस्टुरेन्ट, शौचालय, स्नान सुविधा, पार्किंग स्थल, इत्यादि पनि यस समुद्र तटमा पूर्ण छन् ताकि तपाईं आफ्नो परिवारसँग सुरक्षित रूपमा खेल्न सक्नुहुनेछ।
मियाकोजिमा टापु करिब १२० किलोमिटर टापु हो जुन ओकिनावा मुख्य टापुको लगभग २ 120 ० किमी दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। मियाकोजिममा, तपाईं ओकिनावा मुख्य टापु, टोकियो, ओसाका इत्यादिबाट उड्न सक्नुहुनेछ। यो नाहा एयरपोर्टबाट मियाकोजीमा एयरपोर्ट सम्म 290० मिनेट लिन र टोकियोको हनेडा एयरपोर्टबाट 40 घण्टा minutes० मिनेट जति लाग्छ। Yonaha Maehama बीच मियाकोजीमा एयरपोर्टबाट १3मिनेटको बसमा छ।
Yonaha Maehama समुद्र तट एक शान्त र अद्भुत समुद्र तट हो, तर त्यहाँ केही कोरल रीफहरू छन्। त्यसैले यो स्नोर्कलिंगका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। यदि तपाइँ हातमा प्यारा उष्णकटिबंधीय माछासहित कोरल रीफहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने, मियाकोजीमाको पूर्वमा योशिनोकाइगन बिचमा जानुहोस् जुन स्नोर्कलिंग स्पटको रूपमा धेरै प्रसिद्ध छ।
Yonaha Maehama बीच को बालुवा यति राम्रो छ कि तपाईं खाली खुट्टा संग पनि आराम संग हिंड्न सक्छ। व्यक्तिहरूले जेट स्कीइ and र समुद्री समुद्री किनारको अगाडि समुद्रमा उडान डु bo्गा जस्ता गतिविधिहरूको पनि आनन्द लिन्छन्।
योनाहा मेहामा बीच भन्दा9किलोमिटर जति कुरीमा टापु छ, त्यसैले प्रशान्त महासागरका छालहरू योनाहा मेहामा बीचमा सीधै आउँदैनन्। Yonaha Maehama बीच सधैं शान्त हुन्छ। योनाहा मेहामा बीच र कुरीमा टापु बीचमा कुरीमा ओहाशी पुल १ima 1690 ० मिटर लामो छ। कुनिमा टापुको अवलोकन डेकबाट योनाहा मेहामा बीचलाई हेरेर तपाई यो सुन्दर समुद्री तट देख्न सक्नुहुन्छ।
गर्मी मा मियाकोजीमा। सुन्यामा समुद्र तट = शटरस्टकमा समुद्र हेरिरहेको एक जोडी
Sunayama समुद्र तट को नक्शा
सुनायामा बीच मियाकोजिमा टापुको उत्तरपश्चिमी भागको सानो समुद्री तट हो। यो मियाकोजीमा एयरपोर्टबाट कारबाट करीव १ 15 मिनेटमा छ। यद्यपि सुनयमा बीचको वरपर क्षेत्रमा कुनै बस स्टप छैन। सुनायमा बिचमा जानको लागि तपाईले कार भाँडामा लिनुपर्दछ र तपाईको कार समुद्री किनारको फ्रि पार्कि inमा पार्क गर्नु पर्छ। यदि यो पार्किंग भरिएको छ भने, तपाईं अर्को समयमा फेरि आउनु पर्छ। यदि तपाई कार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भने तपाई साइरा भाडामा लिनुहुनेछ हीरा शहरबाट। यो लगभग ra किलोमिटर हीरा शहर बाट सुनयमा बीचमा छ। बीचमा बाटो सपाट छ।
यसैले सुनयमा बीच एक असुविधाजनक ठाउँमा छ। जे होस्, यो समुद्री तट पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। त्यो किनभने Sunayama बीच फोटोग्राफी को लागी सही हुन एक आश्चर्यजनक सुंदर ठाउँ हो।
सुनयमा बीचमा राम्रो सेतो बालुवा छ जुन माथिको योनाहा मेहामा बीचको रूपमा राम्रोसँग फैलिएको छ। तपाईं पनि ना bare्गो खुट्टा हुनुपर्छ र बालुवाको अनुभूति लिनुहोस्। समुद्री किनारको किनारमा, त्यहाँ एक चित्र आकार चट्टान माथिको चित्रमा देखिएजस्तो छ। तपाईं एक चित्रमा एक सुन्दर सेता बलुवा समुद्र तट, एक समुद्री निलो समुद्र, र एक आर्क आकार चट्टान को शूट गर्न सक्नुहुनेछ।
"Sunayama" को अर्थ जापानीमा बलुई पहाड हो। यसको नामले देखाउँदछ, त्यहाँ यस समुद्र तट र पार्किंग बीच बीचमा बालुवाको पहाड छ। ढलान ठाडो भएकोले, पुराना पर्यटकहरू, इत्यादि हिड्नको लागि केहि कठिन हुन सक्छ। समुद्र किनारमा साना पसल र भाडा पसलहरू छन्। भाडाको पसलमा, तपाईं समुद्र तट छाता, जीवन ज्याकेट, स्नोरकेल सेट इत्यादि लिन सक्नुहुनेछ। यद्यपि कृपया ध्यान दिनुहोस् कि शौचालय केवल पार्कि lot स्थलमा नै छ।
सुनयमा बिचको अगाडि समुद्रमा छालहरू तुलनात्मक रूपमा अग्लो छन्। यो समुद्री तट अलि गहिरो छ, तर कहिलेकाँही जब यो अचानक गहिरो हुन्छ। त्यहाँ धेरै धेरै कोरल रीफहरू छैनन्। जब म मियाकोजिमा बस्छु, म सधै योनाहा मेहामा बीच बीच खेल्छु र फोटोग्राफरका लागि सुनयमा बीचबाट। मिय्याकोजिमामा, म सुझाव दिन्छु कि तपाई बिभिन्न प्रकारका अद्वितीय समुद्री तटहरु प्रयोग गर्नुहोस्।
कोन्डोई बीच (टेकटोमी टापु, ईशिगाकी-शि, ओकिनावा) = शटरस्टक
टेकटोमी टापु जहाँ परम्परागत रातो टाईल घरहरू खडा गरियो = शटरस्टक
कोन्डोई बीच को नक्शा
जापानको दक्षिणपश्चिमी छेउमा रहेको सागरमा, त्यहाँ टापुहरू सामूहिक रूपमा याएयामा द्वीपसमूह भनिन्छ। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा लोकप्रिय टापु ईशिगाकिजीमा टापु हो। तपाईं ओकिनावा मुख्य टापु, टोकियो, ओसाका इत्यादिबाट इशिगाकिजीमा उडान गर्न सक्नुहुन्छ र ईशिगाकिजीमाबाट फेरीमा मात्र १० मिनेटमा त्यहाँ टेकटोमिजीमा टापु भनिन्छ।
कोन्डोई बीच टेकटोमिजिमाको पश्चिम तर्फ एक शान्त, उथले समुद्र तट हो। शुद्ध सेतो राम्रो बालुवा यस समुद्र तटमा फैलिन्छ। किनकि यो एकदम शान्त समुद्र हो, तपाईं टाढाको टापुको वातावरणको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। तारा बिरालाहरू समुद्री किनार वरिपरि सुतिरहेछन्।
शौचालय र नुहाउने सुविधा छ। गर्मीमा मात्र पसल खुल्ला छ। तपाईं यस स्टोरमा समुद्र तट छाता, समुद्र तट कुर्सी, फ्लोटिंग रिंग्स, स्नोरकल सेट आदि लिन सक्नुहुनेछ। यद्यपि कोरल चट्टानहरू यति नजिक छैनन्, त्यसैले यो स्नोर्कलिंगका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ।
टेकटोमिजिमा एउटा फ्ल्याट टापु हो जुन9किलोमिटर जति छ, ओकिनावा मुख्य टापुको 400०० किमी दक्षिण पश्चिममा छ। त्यहाँ टापुमा रातो टाईलहरूको सुन्दर परम्परागत घरहरू छन्। बस वा बाइक भाडा टापु भित्र घुम्न सिफारिस गरिन्छ। यो टापुको पोर्टबाट कोन्डोई बीचमा करीव २. kilometers किलोमिटर पर छ।
कोन्डोई बीचको लागि, तपाईं इशिगाकी टापुबाट एक दिन यात्राको लागि पौडी खेल्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि म सिफारिश गर्दछु कि होटेलमा बस्नुहोस् वा टेकटोमिजीमा इन। किनकि टेकटोमिजिमासँग अद्भुत पुरानो परम्परागत घरहरू र बस्ने संस्कृति छ। टेकटोजिमिमा, पर्यटकहरूका लागि भैंसे द्वारा बनाइएको सवारी साधनहरू पनि सञ्चालनमा छन्। पानी भैंसी मान्छे भन्दा बिस्तारै जान्छ। तपाईं टेकटोमिजिमा र स्फूर्तिमा सुस्त जीवनको आनन्द किन लिनुहुन्न?
टेकटोमिजीमा बस्ने ठाउँहरू मध्ये, म सिफारिस गर्दछु "HOSHINOYA टेकटोमी Ialand"। HOSHINOYA जापान मा एक प्रतिनिधि रिसोर्ट होटेल चेन हो। टेकटोमिजीमा यो होटल टेकटोमिजिमाको परम्परागत संस्कृति अनुसरण गरेर बनेको हो। तपाईं एक सुरुचिपूर्ण र बौद्धिक रिसोर्ट जीवनको मजा लिन सक्षम हुनुपर्दछ।
>> HOSHINOYA टेकटोमी Ialand को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
हेटरुमा-जीमामा निशिहामा बीच, ओकिनावा = शटरस्टक
Nishihama समुद्र तट को नक्शा
अन्तमा, म जापानको दक्षिणी टापु (निर्जन टापु बाहेक) मा सुन्दर समुद्री तट प्रस्तुत गर्नेछु।
यो हेटरुमा टापुको निशिहामा बीच हो।
हेटरुमा टापु ओकिनावा मुख्य टापुको w 15० किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा करिब १ 470 किलोमिटरको टापु हो। जनसंख्या करीव 500०० मान्छे छ। इशिगाकिजीमा टापुबाट हेटेरुमा टापुसम्म, यसले १ घण्टा १० मिनेट एक उच्च-गति पोतद्वारा र लगभग २ घण्टा फेरीबाट लिन्छ। जे होस्, यी प्राय: उच्च छालहरूको कारण रद्द गरिन्छ। किनकि यो त्यस्तो असुविधाजनक टापु हो, त्यहाँ कुनै हतपल्ती छैन।
हेटरुमा टापुको उत्तरी भागमा रहेको निशिहामा बीच पनि एक देहात र सुन्दर ठाउँ हो जुन ठूलो रिसोर्ट होटेलको विकाससँग सम्बन्धित छैन। निशिहामा बीच पोर्टबाट १ from मिनेट पैदल छ। तपाई साइकल पनि भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ स्नान सुविधाहरू र शौचालयहरू छन्, तर जहाँसम्म मलाई थाहा छ, त्यहाँ अझै कुनै पसल वा रेस्टुरेन्टहरू छैनन्। यसको सट्टामा, यहाँ एक अविश्वसनीय शुद्ध सेतो बालुवा समुद्र तट छ। क्रिस्टल स्पष्ट सागर अगाडि चम्किरहेको छ।
यद्यपि कोरल रीफहरू हेर्नको लागि तपाईंले तटबाट धेरै टाढा जानु पर्छ। यस समुद्री किनारमा यति धेरै उष्णकटिबंधीय माछाहरू छैनन्।
हेटेरुमा टापुमा, भर्खरको होटेल र ईन्सनहरू बिस्तारै बढ्दैछन्। यस टापुमा रातको तारा अचम्मै सुन्दर छ। किन तपाईं यस्तो टाढाको टापुमा आराम गर्न आफ्नो समय खर्च गर्नुहुन्न?
एनी मोरो लिन्डबर्गले आफ्नो पुस्तक "समुद्रबाट गिफ्ट" मा लेख्नु भएपछि समुद्र तटले थकित व्यक्तिहरूको हृदय निको पार्छ। जापानमा सुन्दर समुद्र तटहरू पनि छन् जुन तपाईंको थकित हृदयलाई निको पार्न सक्छ। के तपाई आफ्नो दिमाग र शरीरलाई स्फूर्ति दिन चाहानुहुन्छ? यहाँ तपाईं केहि सबैभन्दा ठूलो को फोटोहरू फेला पार्नुहुनेछ ...